Mazava ho azy fa samihafa tanteraka amin’ ny fisidinana amin’ ilay Piper Cub ny zavatra niainana tamin’ ilay F-18. Nampiseho ahy ny hakanton’ ny fisidinana amin’ ny fomba haingam-pandeha kokoa izany. Tahaka ny fampiharana ny lalàn’ ny haitohidrivotra amin’ ny fomba tonga lafatra kokoa izany. Na izany aza, nampahatsiahy ahy teo no ho eo koa ny fisidinana niaraka tamin’ ireo Blue Angels fa natao ho an’ ny tanora ny manamory fiaramanidina mpiady. Izao indray no voalazan-dry Wright mirahalahy: “Fa hafa noho ny zavatra hafa rehetra kosa, ny zavatra tsapa [amin’ ny fisidinana] dia fahatsapana fiadanana tonga lafatra, miaro fientanentanana izay faran’ ny mampihenjana ny hozaketsika tsirairay.”2 Ankoatr’ izany, maneho fomba iray hafa tanteraka amin’ ny fananana “anjely” manodidina anao sy manohana anao ny f